Oromota ajjeefaman 2020 | Advocacy for Oromia
(Oromiyaa, 6 Ebla 2020) Mootummaan Abiy Ahmad Guyyaatti yoo xiqqaate Oromoota shan ajjeesaa akka jiru beekame.
Daataa Qeerroo Bilisummaa Oromoon walitti qabame akka ibsutti, baatii lamaan darban kana keessa qofaa sabboontonni Oromoo 150 jala gahan mootummaa Abiyiin ajjeefamaniiru.
Tarreessa maqaa nu gahe irraa akak hubatamutti kanneen ajejechaan kun irratti xiyyeefafte, Qeerroo Oromoo fi sabboontota Oromoo quuqama sabaa qabanii dha.
Daataan Oromoota ajjeemanii kun seenaa qabsoo Oromoo keessatti gochaa hamaa raawwatame ta’ee galmeefafmeera.
Haga yoonaatti qaamni mootumama ajjeechaa sabboontota Oromoo irratti raawwatamee gaafatame fudhate tokko illee hin jiru.
Daataa Oromoota Ajjeefamanii kana PDF kanatti aanee jiru kana tuquun argachuu dandeessu: Daataa Ajjeechaa 2020
Tags: Ajjeechaa, Daataa, Oromota ajjeefaman 2020